Ọ ga-adị mfe inweta backlinks na 2018?
Ụlọ njikọ na-arụ ọrụ kachasị na njikarịcha search engine. Otú ọ dị, a gbanwewo usoro nke njikọ njikọ kwa afọ. Onye kachanụ pụtara na 2013 mgbe Google kere ya nyochaa Penguin. Nwelite a mere ka ihe niile pụta ìhè, na-ebuli uru nke njikọ njikọta na ịghacha njikọ niile nke spammy - spin gratuit.
N'ụbọchị anyị, njikọ ụlọ bụ nnukwu esemokwu. Otu ọkachamara na-ekwu na uru nke njikọ ndị ọzọ ejirila jụụ mgbe ndị ọzọ na-arụ ụka na ọ dị mkpa ka ọ dị elu kemgbe ọtụtụ afọ. A na - eme nghọtahie ndị a site na ịghasị spam njikọ, na mmelite Google mgbe niile nke na - agbanwe ihe ndị ka mkpa na mpaghara a.
Otú ọ dị, n'agbanyeghị ihe ị nụrụ banyere ụlọ njikọ, ọ ka na-emetụta ọnọdụ gị na saịtị. Enweghị weebụsaịtị nwere ike ịkwado elu na SERP enweghị mma na njikọ njikọ dị mkpa.
Ugbu a, afọ 2017 na-abịa ná njedebe, anyị nọkwa n'ehihie nke ememme Krismas 2018. Google ka na-alụso ọgụ megide usoro ụlọ ọrụ na-akwado njikọ gbasara ihe ntinye. Ejighị usoro ụlọ ọrụ na-ejikọta ọnụ. Nchịkọta weebụ na ndị ọzọ na-ahọrọ itinye ego n'inwekọ nkà na njikọ ụlọ. Ọ na-akpata nnukwu asọmpi na mpaghara a.
Onye na - enweghị ike ịjụ ma ọ ga - abụ mgbanwe ọhụrụ anyị ga - enweta na njikọ njikọ njikọ na 2018. Dịka onye nwe ụlọ ọrụ nwere ọganihu, ọ dị mkpa ka ị mara ihe ga-arụ ọrụ na ihe na-adịghị.
N'isiokwu a, ị ga-ahụ ụzọ ụfọdụ ga-eme n'ọdịnihu iji mee ka ị nọrọ na TOP nke nyocha njikarịcha search engine.
Olee ihe dị mfe inweta backlinks na 2018?
Mee ihe niile aka
Anyị na-ebi n'ime ụwa a na-akpaghị aka ebe ihe ndị e kere aka na-enwe nnukwu uru, karịsịa na ebe njikọ njikọ. Jide n'aka na ị na-ezo aka na ndị ọrụ niche ahịa gị ka ha nweta akara azụ azụ ndị ọzọ. Agala maka ịmepụta ozi ịntanetị ka ha na-adọrọ mmasị gị dị ka spam.
Ọzọkwa, egbula maka ngwanrọ software njikọta na ọ nwere ike imetụta ọnọdụ saịtị na aha njirimara. Enwere m ike ikwu na ị na-ezo aka ndị ọkachamara SEO ọkachamara nwere ike ịmepụta njikọ gị na saịtị gị aka.
Usoro ụlọ ọrụ mgbagwoju anya
Ọ bụ usoro ọkachamara nke ịkwọ ụgbọala nke ndị ọkachamara SEO na-eji eme ihe iji nweta njikọ na ebe nrụọrụ weebụ. Ọ dabeere na ịchọta ụdị ọdịnaya dị na niche gị nke a na-atụlerịrị dị ka isi iyi na-achọ ohere iji mepụta ọdịnaya dị mma n'otu ozi ahụ.
Ikwesiri ichikota akwukwo di iche iche nke di n'ichekwa ahia gi iji tinye njikọ gi n'ebe ahu. Ọ bụrụ na a na-ebipụta ọdịnaya a na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama, o yikarịrị ka ọ ga-enwe ọkwa dị elu. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ohere magburu onwe ya maka ịnweta mmiri njikọ site n'aka isi iyi. Site na ịmepụta ọdịnaya nke ọchụchọ, ị nwere ike wepụ ihe mbụ ahụ ma nweta ezigbo ihe ọ ga-eme.